အမဲမိုးခိုသားကင် ၁၀ ကျပ်သား
အာလူးပြုတ် ၁၀ ကျပ်သား
ချင်း ( အနှစ်ကြိတ်ပြီး ) ၂ စွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ ( စဉ်းပြီး ) ၁ စွန်း
နံနံပင် ( စဉ်းပြီး ) ၂ စွန်း
မီဆို ပဲငပိအနှစ် ၂ စွန်း
ဆန်ရှာလကာရည် ၂ စွန်း
သံပုရိုရည် ၁ စွန်း
သံလွင်ဆီ ၂ စွန်း
ရက်ဒစ်ရှ် မုန်လာဥ ( အကွင်းလှီးပြီး) ၃ ကွင်း
ရေသန့် အေး ၁ စွန်း
၁ ။ အမဲမိုးခိုသားကင် ကို ပါးပါးလှီးပြီး အာလူးပြုတ် ကို လေးထောင့်အတုံးများလှီးရျွ် ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီး ကိုထက်ခြမ်းလှီးထားပါ။
၂ ။ နံနံပင် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ချင်း ၊ မီဆိုပဲငပိအနှစ်၊ သံပုရိုရည် ၊ ဆန်ရှာလကာရည် ၊ သံလွင်ဆီ ၊ ရေသန့် အေး ၊ ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် နှင့် ငရုပ်ချဉ်ဆော့စ် တို့ ကို ရောမွှေထားပြီး အိုင်းစ်ဘက်ဆလပ်ရွက် နှင့် ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ဇလုံး တစ်လုံးတွင် ရောမွှေထားပါ။
၃ ။ အသင့်စပ်ထားသော မီဆိုအချဉ် နှင့် ဆလပ်စုံ ၊ အာလူးပြုတ် တို့ ကို သီးခြားစီရောနယ်ထားပါ။
၄ ။ အသင့်လှီးထားသော အမဲမိုးခိုသားကင် ကို အသင့်သုပ်ထားသော ဆလပ်စုံပေါ်တင်ရျွ် အာလူး နှင့် ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီး ကို ဘေးနှစ်ဘက်တွင်ထည့်ထားပါ။
၅ ။ အသင့်စပ်ထားသော မီဆိုအချဉ် ကို အမဲမိုးခိုသားကင် ပေါ်ဆမ်းပြီး အမဲမိုခိုသားကင် နှင့် အာလူးပြုတ် မီဆိုအချဉ်သုပ် ကို တည်ခင်းပါ။
Leftover Roasted Beef & Potato Salad with Miso Vinaigrette .
Roasted Beef Tenderloin 160 g
Steamed Potato 160 g
Grated Peeled Fresh Ginger2tbsp
Miso ( Soybean Paste )2tbsp
Sliced Red Radish3slices
Sliced some leftover Roasted Beef Tenderloin and steamed Potato cut into cubes then cut Cherry Tomato into half and put aside.
Combine chopped Coriander, Chopped Garlic, Grated Fresh Ginger, Miso ( Soybean Paste ), Lemon Juice, Rice Vinegar, Olive Oil, Cold Water, Salt, Crushed Black Pepper and Tabasco inasmall bowl, stirring withawhisk. Combine lettuce and remaining ingredients inalarge bowl.
Drizzle half of MisoVinaigrette over lettuce mixture; toss to coat and also steamed Potato cubes in another bowl with the same Vinaigrette.
Place the leftover Roasted Beef Tenderloin on the bed of Lettuce mixture then steamed potato and Cherry Tomato on the side.
Pour the Miso Vinaigrette on top of leftover Roasted Beef Tenderloin and serve.